Fandraharahana ara-barotra Sahirana ny Malagasy
FEOI andiany faha-12 Hitrandraka ny tsenan’i Afrika
Hotanterahina any Saint Dénis La Réunion amin’ny 25 hatramin’ny 27 septambra ho avy izao ny Fihaonambe ara-Toekaren’ny Oseana Indiana (FEOI) andiany faha-12.
Hetsika goavana « Haona Fi 2019 » Eny amin’ny Village Voara Andohatapenaka ny fotoana
Hatao ny 30 aogositra hatramin’ny 2 novambra eny amin’ny Village voara ny hetsika goavana « Rodorodo Haona Fi 2019 » andiany faharoa, karakarain’ny foibe FJKM (Fiangonan’i Jesosy Kristy eto Madagasikara),
Politika fampivoarana ny vehivavy Tsy hita ao anatin`ny PGE
Niavaka tokoa ny fanolorana ny programanasa ankapoben`ny fanjakana (PGE) nataon`ny praiminisitra Ntsay Christian ary nahabe fanantenana.
Savony avy any ivelany Hiakatra 34% ny hetra alaina aminy
Hiakatra 34% ny hetra alaina amin’ny fampidirana savony eto Madagasikara manomboka ny 01 septambra izao.
Olana amin`ny sehatry ny rano Manakorontana ny toekarena
Tena ilain`ny olombelona amin`ny sehatra rehetra ny rano. Tsy azo tsinontsinoavina ny rano na odiana tsy hita ireo olana mahakasika izany toy izay nitranga teny Andraisora, Ankatso…
Fambolena sy fiompiana eto Madagasikara Olana ny lalam-barotra
Nampahafantarina omaly talata 13 aogositra tetsy amin’ny Hotely Le Louvre Antaninarenina ny fisian’ny foara lehiben’ny fambolena sy fiompiana andiany fahatelo (FIA).
Latsaka ambany tanteraka ankehitriny ny fahefa-mividin’ny Malagasy Mahatsapa izany ny mpivarotra ary tena hita mihena mandrakariva ny fahefa-mividy.
Amin’ny lafiny haingo, ohatra, dia nanambara ny ankamaroan’ireo mpivarotra ao amin’ny AVANCE CENTER Behoririka fa tena misy ny tsena rehefa fotoanan’ny fetin’ny reny. Tamin’ny farany teo anefa dia tena vitsy ny mpanjifa ary ambany be ny vola niditra raha oharina tamin’ny taona 2018. Anisan’ny mampikaikaika ny mpivarotra ihany koa ny fidangan’ny hofantrano alain’ny sinoa izay mahatonga azy ireo niala tsikelikely. Manginy fotsiny, hoy izy ireo ny fatiantoka rehefa misy foara sy tsena any ivelany, indrindra amin’ireo karazana fety. Aleon’ny olona mantsy manjifa eny amin’ireny toerana ireny toy izay hiditra mankany amin’ireo botika izay efa malaza ho lafo entana. Efa mipaka amin’ny ankamaroan’ny tokantrano Malagasy ity fahefa-mividy latsaka ambany dia ambany ity ary hita ho sempotra tanteraka ankehitriny ireo mpandraharaha ara-barotra.